admin, Author at NaulooDhun
छोरीको काठमाडौं मृ त्यु पछि, धादिङ्गमा बुवा आमाको पनि यस्तो दुखदायी मृ त्यु भनिन्छ, श्रीमान श्रीमतीको झ’गडा ‘परालको आगो’ हो एकैछिनमा साम्य हुन्छ । तर, तीर्थबहादुर विक र भीममाया विक बीच त्यो कुरा लागु भएन । एकआपसमा पैदा भएको शं’कैशं’कामा हुने घरझ’गडाले सोमबार श्रीमान श्रीमतीले नै ज्या’न गु’मा’उनुप¥यो । उनीहरुका कान्छो छोरा सरोज भन्छन्,‘सामान्य कुरामा […]
July 2, 2021 adminLeaveaComment on अ,गालो मार्ने बहानामा धेरैले बु,बु दुख्ने गरे छा,तीमा टाँ,से तर सबैको प,र्दाफास गर्छु एकदिन : जुरेली
अगालो मार्ने बहानामा धेरैले बुबु दुख्ने गरे छातीमा टाँसे तर सबैको पर्दाफास गर्छु एकदिन : जुरेली जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : तपाईंको जीवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ ! जतिबेला तपाईंको मृ:त्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक ला:स बन्न सुरु गर्छ । अरे … ला’स लिएर आउनुहोस्। … ला’स लाई […]
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!! अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ […]
के जीवन बिताउन श्रीमान् नै चाहिन्छ त ? जीवन विताउनका लागि श्रीमान् वा श्रीमती नै चाहिन्छ त ? दाम्पत्य जीवन विताउनै पर्छ त ? यसमा एउटा ठूलो जमातले सहमतिको टाउको हल्लाउन सक्छन् । तर, एउटा जमात यस्ता पनि छन्, जो दाम्पत्यलाई ब`न्ध`न ठान्छन् र त्यसबाट उन्मुक्त जीवन विताउन राजी हुन्छन् । विवाह गर्नैपर्छ भन्नेमा सबैको […]
१६ असार, काठमाडौं । दलितलाई कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी घरधनी सरस्वती प्रधानले आफूलाई षड्यन्त्रमुलक ढंगले फसाइएको भन्दै रुपा सुनारविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएकी छन् । बुधबार आयोगमा निवेदन दिँदै उनले आफूले जातीय विभेद एवं छुवाछुतको व्यवहार नगरेपनि आफूमाथि षड्यन्त्र गरी प्रहरीमा थुनाएको भन्दै रुपा सुनारलाई हदै सम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् […]
June 30, 2021 June 30, 2021 adminLeaveaComment on हिलोमा कुस्ती खेलेर छत्र शाही बिवादित बनेपछि कल्पना दाहालले यस्तो भनिन । के टिका सानुसँग उनको दुश्मनी छ ? (भिडियो हेर्नुस)
हिलोमा कुस्ती खेलेर छत्र शाही बिवादित बनेपछि कल्पना दाहालले यस्तो भनिन । के टिका सानुसँग उनको दुश्मनी छ ? (भिडियो हेर्नुस) टिकटकमा पछिल्लो समय युटुबमा आएका कुराहरु भिडियो क्लिपको रुपमा भाईरल भैहाल्छ । अन्तर्वार्ता लगायतका रमाईला र रोचक क्लिपहरु १५ सेकेण्ड वा त्यो भन्दा लामो क्लिप बनाएर टिकटकमा सबैले हाल्न सक्छन् । त्यसमा कतिले रमाईला […]
June 30, 2021 adminLeaveaComment on रुकुमबाट नेपालगञ्जतर्फ जाँदै गरेको ३६ जना सवार यात्रुवाहक बस पल्टियो
रुकुमबाट नेपालगञ्जतर्फ जाँदै गरेको ३६ जना सवार यात्रुवाहक बस पल्टियो राप्ती राजमार्गअन्तर्गत तुलसीपुर–सल्यानखण्डको सिरखोलामा रुकुमबाट नेपालगञ्जतर्फ जाँदै गरेको रा १ ख २४३९ नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २८ जना घाइते भएका छन् । तिनलाई अहिले उपचारका लागि तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएको छ ।इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक भmलक शर्माका अनुसार घाइतेलाई घटनास्थलबाट उद्धार […]
June 30, 2021 adminLeaveaComment on घरमा टिउसन पढ़न आएकी युवतीलाई शिक्षकले फकाउदै ज’ब’रजस्ती ग रे को भिडियो भयो संसार भर भाइरल (हेर्नुहोस्)
घरमा टिउसन पढ़न आएकी युवतीलाई शिक्षकले फकाउदै ज’ब’रजस्ती ग रे को भिडियो भयो संसार भर भाइरल (हेर्नुहोस्) घरमा टिउसन पढ़न आएकी युवतीलाई शिक्षकले फकाउदै ज’ब’रजस्ती ग रे को भिडियो भयो संसार भर भाइरल (हेर्नुहोस्) टिउसन पढ़न आएकीलाई शिक्षकले फकाउदै ज’ब’रजस्ती ग रे को भिडियो भयो भाइरल-भिडियो हेर्नुहोस्टिउसन पढ़न आएकीलाई शिक्षकले फकाउदै ज’ब’रजस्ती ग रे को […]
June 30, 2021 adminLeaveaComment on आमाको लास सडक छेउमा राखेर रुदै गरेका टुहुरा बच्चाहरु !! यदि तिमीमा प्रेम छ भने फोटो छुनुहोस् र R.I.P. लेख्नुहोस् !!
आमाको लास सडक छेउमा राखेर रुदै गरेका टुहुरा बच्चाहरु !! यदि तिमीमा प्रेम छ भने फोटो छुनुहोस् र R.I.P. लेख्नुहोस् !! दु:खद दृश्य , दुई जना बालक आफ्नो आमा को लास को अगाडी बसेर रोई रहेका छन् । उनीहरू मन देखि आमा मा फेरि सास आओस् भन्नि कामना गर्दै छन्। तर ती बालक लाई k […]
क्यानडामा सहनै नसक्ने उखरमाउलो सुख्खा गर्मी, ज्या,न गु,माउनेको सङ्ख्या ६० ना,घ्यो
June 30, 2021 adminLeaveaComment on क्यानडामा सहनै नसक्ने उखरमाउलो सुख्खा गर्मी, ज्या,न गु,माउनेको सङ्ख्या ६० ना,घ्यो
क्यानडामा सहनै नसक्ने उखरमाउलो सुख्खा गर्मी, ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ६० नाघ्यो इन्भाइरोनमेन्ट क्यानडाले ब्रिटिश कोलम्बिया र अलबेर्टामा बढ्दो तापक्रमबारे सचेत गराउँदै सूचना जारी गरेको थियो क्यानडाको दक्षिणी प्यासिफिक नर्थवेष्ट क्षेत्रभरि तापक्रम बढिरहँदा कैयौँ मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। ब्रिटिश कोलम्बियास्थित प्रहरीले सोमवार यता ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ६० नाघेको जनाएको छ र त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै छन्। […]